Shir u furmay ROOBLE iyo beesha caalamka iyo Rooble oo ku dhowaaqay dhisidda ciidan u gaar ah doorashada - Caasimada Online
Home Warar Shir u furmay ROOBLE iyo beesha caalamka iyo Rooble oo ku dhowaaqay...
Shir u furmay ROOBLE iyo beesha caalamka iyo Rooble oo ku dhowaaqay dhisidda ciidan u gaar ah doorashada
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo xubnaha beesha caalamka ee ku sugan Soomaaliya, ayaa shir waxa uu maanta uga furmay xerada Xalane.
Kulanka oo ay qaban qaabadiisa laheyd beesha caalamka ayaa waxaa looga wada hadlayaa doorashooyinka iyo sidii Rooble lagala shaqeyn lahaa in dalka ay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah, islamarkaana ay ku wada qanacsan yihiin saamileyda siyaasadda.
Sidoo kale, kulanka ayaa waxaa looga wada hadlayaa sidii ay beesha Caalamka u fududeyn laheyd shirka la filayo inay Dowladda iyo Madaxda Maamul Goboleedyada ku yeeshaan Muqdisho 20 Bishaan sida uu iclaamiyey Ra’isul wasaare Rooble.
Rooble ayaa kulanka ka sheegay in xukuumadda ay waddo qorshe ay kusoo dhiseyo ciidamo khaas ah oo fuliya amniga dooarshada, kuwaasi oo loo wada dhan yahay dhex-dhexaadna ah. Waxa uu intaas ku daray inay ciidankaasi ku shaqayn doonaan xayndaabka sharci uuna dhisiddooda kala tashan doono dhammaan saamileyda siyaasadda dalka.
Waa shirkii u horreeyay ee dhex mara Ra’iisul Wasaare Rooble iyo Beesha Caalamka, tan iyo markii Ra’iisul Wasaaruhu la wareegay arrimaha doorashooyinka iyo amniga oo looga fadhiyo inuu dhowaan guda galo hirgelinta heshiiskii 17 September.
Shirkaan ayaa imaanayo kadib markii madaxweyaha waqtigiisa dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ogolaaday inuu Mas’uuliyadda doorashada iyo amnigeeda uu ku wareejiyo Ra’isulwasaare Rooble kadib markii Magaalada Muqdisho uu ka dhacay dagaal dhiig ku daatay oo u dhaxeeyey Ciidamada Dowladda iyo ciidamo diidan muddo kordhin loo sameeyey Farmaajo.